Crypto Tanora - Vaovao farany - Blockchain News
Popularity cryptocurrencies, efa tonga toy izany kirany, fa ny tena ihany no tena kamo na mailo Bypass tontolo izao ny antoko. Raha ny fandehany fa ny fahasahiana sy ny fikirizana dia tsy hita ihany ny mpivarotra sy ny mpampiasa vola amin'ny am-polony taona maro ny fifanakalozana ara-barotra eo amin'ny traikefa, fa ny olon-tsotra koa ny tanora.
Modern zaza no teraka tany amin'ny vanim-potoana nomerika, voahodidin 'izy ireo isan-karazany fitaovana hatramin'ny mbola kely, ary manomboka miresaka amin'ny solosaina alohan'ny taranaka teo aloha. Mbola kely, izy ireo fifandraisana toy izany fahafahana izay tsy nanonofy ny amin'ny taranaka teo aloha. Ary noho izany, solontenan'ny ny taranaka Z dia haingana kokoa no nampianatra sy mahatsapa kokoa voajanahary eto amin'izao tontolo izao ny teknolojia maoderina.
Erik Finman, iray amin'ireo tanora nahomby indrindra eo amin'ny sehatry ny cryptocurrency, ao amin'ny 12 taona nahatsapa ny fanantenana ny bitcoin. Fa 6 taona, dia nitondra ny nomerika sata ho 400 hafahafa BitCoins, izay mihoatra noho ny 4 tapitrisa dolara mitovy amin'ny taha amin'izao fotoana izao. Ary izany rehetra izany dia nanomboka tamin'ny 2011 amin'ny $ 1000 voavonjy tamin'ny fiaraha-misakafo sy ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana fanomezana. Bitcoin dia avy eo mendrika $ 12.
By 2013, bitcoin efa nitombo be dia be ny nivarotra fananan'ny Eric dia ampy mba hanomboka ny fanompoana mba hitady mpampianatra ny Botangle, izay koa tatỳ aoriana vidin'ny BitCoins. Ny tanora crypto-olona mafana fo dia tsy ho hijanona any, in ny heviny, bitcoin mitana manintona ny fampiasam-bola, ary ny vidiny dia afaka hahatratra iray tapitrisa dolara. Ny tanora mpanapitrisa koa mino fa ny rafi-pampianarana ankehitriny dia tranainy, sy ny YouTube sy ny Wikipedia afaka mampianatra kokoa. Mihitsy aza izy niady hevitra tamin'ny ray aman-dreniny fa tsy handeha ho any amin'ny oniversite raha afaka hahazo iray tapitrisa dolara alohan'ny olon-dehibe mahatratra. Tsy lesona ratsy ho an'ny taranaka maoderina?
Mazava ho azy, Eric Finman dia tsy ny ohatra fotsiny ny tanora tia amin'ny cryptocurrencies. ny tena “mpifaninana” dia Eddy Zillan, izay tonga voalohany liana amin'ny crypto-mazoto olona ny taona 15. Fa kely loatra ny hanomboka ny Coinbase kaonty, Eddy fa tsy hitsahatra izany, ary dia nahita fomba manodidina ny toerana fitsipika. Ny zavatra voalohany nataony dia hividy Ethereum for $ 100. Tsara homarihina fa tsy dia nisy jatony mpitoraka bilaogy sy ny gazety, tsy misy olona afaka mampianatra ny fomba hanao zavatra araka ny tokony ho. Na eo aza izany, ilay zazalahy Nahazo ny voalohany $ 10 nandritra ny roa ora. Tsy Mety tsy nahavoa azy, satria 10% ao anatin'ny ora vitsy – tsara fitomboana. Taty aoriana dia vola momba ny $ 12 arivo sy iray alina teo amin'ny Crypt. Fa isan-taona dia nitombo ny $ 350 arivo. Ary Zillan dia 18 taona, dia manana ny portfolio-sarobidy noho $ 1 tapitrisa sy ny asa ao an-mpanoro hevitra Cryptocurrency Financial.
hafa “Cryptoteenager” – Andrew Cory, 11-taona, mpianatra ny faha-6 endrika nahavita nanoratra momba ny Bitcoin iray manontolo boky, in izay hita taratra ny fahitana momba ny fototry ny cryptocurrency sy ny blockchain. Ny boky, angamba ny zandriny indrindra manam-pahaizana momba kryptovlyutam mety ho vidiana aza on Amazon. ny soa, mazava ho azy, dia natao voalohany indrindra ho an'ny ankizy, izay, na izany aza, tsy hanimba ny fifandraisany. Andrew mihitsy no, araka ny azy, ny tsotra 0.02 BitCoins.
Misy tanora crypto-mpankafy sy ny “ratsy ry zalahy”. Noho izany, ny Bitcoin Platinum, maro mamitaka, dia natomboky ny tanora iray fraudster. Na izany aza, ny vahoaka nihaino azy io ara-potoana, ary tsy maintsy niaiky ny tsy rariny ny tetikasa. Araka ny azy, dia nikasa hanangona ihany $ 5,000.
Mazava ho, any aoriana ny fangatahana ho an'ny manam-pahaizana manokana eo amin'ny sehatry ny toe-karena nomerika dia hitombo ihany. Ary ny soso-kevitra, rehetra kaonty, dia tsy handeha haingana toy aoriana na.
Lavinia hoy i:
Oktobra 22, 2018 amin'ny 7:44 PM